ORINASA AMBATOVY: NITSIDIKA TANY TOAMASINA IREO SOLONTENAN’NY FIRENENA MPAMPIASA VOLA AO AMINY
On fév 5, 2020 7 000
Nanatanteraka fitsidihana tao Toamasina sy nijery ny fomba fiasa sy fitrandrahana ataon’ny orinasa Ambatovy ny masoivoho efatra nahitana ny Masoivohon’i Kôrea Atsimo, Atoa Lim Sang-Woo, ny an’i Frantsa, Atoa Christophe Bouchard, ny an’i Etazonia, Atoa Michaël P. Pelletier, ary ny “Chef de Bureau” ao amin’ny Masoivoho an’i Nôrvezy, Atoa Andréas Danevad, afakomaly.
Nanombohana ny fitsidihana ny fampahafantarana fohifohy nataon’ny filohan’Ambatovy, Atoa Stuart Macnaughton, momba ny fitrandrahana nikela sy kôbalta. » Miavaka ny fitrandrahana ireto akora ireto, satria eto Madagasikara avokoa no hanaovana ny asa rehetra, manomboka amin’ny fitrandrahana ka hatrany amin’ny fanadiovana. Miavaka koa amin’ny vokatsoa entiny eo amin’ny sehatry ny toekarena. », hoy ity tompon’andraikitra ity nanazava.
Nitohy tamin’ny fitetezana ny orinasa Ambatovy, izay mivelatra amin’ny velarantany 320 ha, ny fitsidihana. Nijery ny toeram-pandiovana (Raffinerie) ireto Masoivoho ireto, avy eo nitohy teny amin’ny toeram-pamoahana ny vokatra nikela sy kôbalta izany.
Teny am-pamaranana ny fitsidihana, samy naneho ny fahitany an’Ambatovy tamin’ny mpanao gazety ny mpitsidika. “Tonga eto izahay satria Ambatovy dia fampiasambola fakan-tahaka. Mino izahay fa raha misy toy izao any amin’ny faritra sasany eto Madagasikara dia tena ho zava-dehibe ho an’ny fampandrosoana an’ity firenena ity izany”, hoy ny nambaran’ny Masoivohon’i Kôrea Atsimo, Atoa Lim Sang-Woo.
Nitovy fijery tamin’izany ny Masoivohon’i Frantsa, Atoa Christophe Bouchard, raha nanambara fa: “Ilaina ny fisian’ny fifanarahana tsara eo amin’ny governemanta Malagasy sy ny orinasa avy any ivelany. Tsara mazava ny fepetra mialoha ny hiavian’ireny orinasa ireny, mipetrapetraka tsara ny lalàna ary mangarahara hatrany mba samy hahazo tombontsoa ny andaniny sy ny ankilany. Ho tombony ho an’ny orinasa sahy miditra mampiasa ny volany, fa indrindra ho an’ny firenena, ny mponina, ary mba hiteraka fiharian-karena ho an’i Madagasikara”, hoy ity diplaomaty ity.
Ny Masoivohon’i Etazonia, Atoa Michaël P. Pelletier, kosa, tetsy ankilany, dia nanamafy ny maha zava-dehibe ny sehatra tsy miankina ho an’ny fampandrosoana ny firenena. “Araka ny hevitro, ny zavatra tena nahaliana sy nanan-danja indrindra dia ny nahita ny maha zava-dehibe ny anjara toeran’ny sehatra tsy miankina. Fantatsika fa eo am-pijerena ny maha zava-dehibe ny anjara toeran’ny sehatra tsy miankina ny Filoha ankehitriny ao anatin’ny drafitra fampivoarany”, hoy ny nambarany.
ALAOTRA MANGORO: LE COUPLE PRÉSIDENTIEL APPORTE DES AIDES AUX SINISTRES
ORINASA AMBATOVY: NANOME FANAMPIANA NY TRA-BOINA TAO AMBATONDRAZAKA